Taliska Mareykanka ee Afrika oo war ka soo saaray Howlgalo ka dhacay Galkacyo | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Taliska Mareykanka ee Afrika oo war ka soo saaray Howlgalo ka dhacay Galkacyo
Baladweyne(HNN)Taliska ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika (AFRICOM) ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgal todobaadkan ciidamo Maraykan ah iyo kuwa sida gaarka ah u tababaran ee Puntland ka fuliyeen magaalada Gaalkacyo.
Afhayeenka AFRICOM, haweeneyda lagu magacaabo Jennifer Dyrcz, ayaa sheegtay in lagu soo qabtay howlgalkaas nin lagu tuhmayo in uu ka tirsanaa kooxda al-Shabaab, kaasoo ay sheegtay in uu ahaa fududeeye Shabaabka u qaabilsanaa dhinaca qaraxyada iyo ilaalo la socotay.
Ninka la xirey oo lagu magacaabo C/risaaq Xuseen Tahliil, ayaa laga soo qabtay magaalada Gaalkacyo, waxaana uu hore u deganaa Mareykanka intii u dhaxeysay sanadihii 2006-2009-kii, isagoo haystay sharciga deganaanshaha dalkaas.
Xildhibaan Maxamed Xuseen Tahliil oo ka tirsan Xildhibaanada Galmudug, lana dhashay ninka lagu xiray Magaalada Gaalkacyo, ayaa beeniyay in walaalkii uu ka tirsan yahay AlShabaab isagoo xusay in ciidamada Maraykanka ay ku soo qabteen ninkaas xog been abuur ah oo ay bixiyeen ciidamada Puntland.
Hase ahaatee Taliska ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika (AFRICOM) ayaa sheegay in ninkan muddo badan lagu raad joogay, ayna ku hayaan baaritaano dheeri ah.